Raisal Wasaarihii Austria oo Xilka iska Casilay, iyo Mid kale oo lagu Dhawaaqay
HomeWararka CaalamkaRaisal Wasaarihii Austria oo Xilka iska Casilay, iyo Mid kale oo lagu Dhawaaqay
Alexander Schallenberg ayaa loo dhaariyay jagada ra’iisul wasaaraha Austria, isagoo bedelay Sebastian Kurz, oo is casilay kadib markii uu ku lug lahaa fadeexad musuqmaasuq.
Intii lagu guda jiray xafladdii dhaarinta ee Schallenberg Isniintii, Madaxweynaha Austria Alexander Van der Bellen ayaa sheegay in dowladda looga baahan yahay inay soo celiso kalsoonidii shacabka oo ay meesha ka saartay eedeymaha qaladka Kurz.
Van der Bellen ayaa yidhi: “Dhammaanteen waxaan filaynaa inay dawladdu ku laaban doonto shaqadeeda isla markaana ay hore wax u sii waddo.”
Schallenberg ayaa ka tirsan xisbiga Kurz ee muxaafidka ah ee Austrian People’s Party, oo madax ka ah dawladda isbahaysiga Austria.
52 jirkan ayaa horay u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda. Diblomaasi xirfadeed Michael Linhart, oo 63 jir ah, ayaa loo dhaariyay beddelkiisa intii ay socotay xafladda Isniintii.